Ihe ị ga-ahụ na Bulgaria | Njem akụkọ
Mariela Carril | 07/04/2022 17:00 | Emelitere ka 07/04/2022 19:17 | Bulgaria, Ihe ị ga-ahụ
Bulgaria bụ obere obodo na Balkans, ugwu na juputara na akụ maka onye njem. Ókèala ebiela kemgbe ọtụtụ puku afọ yabụ enwere ntakịrị ihe niile, nke na-enye akara pụrụ iche na nke agaghị echefu echefu.
Taa, ihe ị ga-ahụ na bulgaria
Ugwu ya kacha ama ama bụ Ndị Balkan Kwesịrị ekwesị, Stara Planina, ugwu Rhodope na Rila. n'ụsọ oké osimiri na Oké Osimiri Ojii na mbara ọzara Thrace na Danube bụ ala ya kacha nwee nri nri.
Isi obodo ya bụ Sofia na akụkọ ihe mere eme nke mba nwere ike malite na narị afọ nke asaa, ịbụ obi omenala nke ndị Slav na Middle Ages. Ruo narị afọ ise ọ nọ n'okpuru ọchịchị Alaeze Ukwu Ottoman, mgbe ahụ, a mụrụ onye ọchịchị na njedebe nke narị afọ nke 1908, ọ ghọkwara mba nweere onwe ya na XNUMX.
Mgbe Agha Ụwa nke Abụọ gasịrị, ọ nọgidere n'ime orbit nke Soviet socialist Republic ruo mgbe ọdịda nke Bloc na njedebe nke '90s.
Anyị nwere ike ịmalite na nke gị isi obodo ochie mara mma, obodo Sofia. Ọ dị n'ebe ọdịda anyanwụ nke mba ahụ, ugwu gbara ya gburugburu. Ọ bụ otu n'ime isi obodo kacha ochie na Europe ebe ọ bụ na akụkọ ihe mere eme ya laghachiri na narị afọ nke asatọ BC, mgbe ndị Thracians rutere.
Obodo ahụ bụ etiti obodo ahụ ma dị oke mkpa na ọkwa okpukpe dịka ọ dị oche nke Chọọchị Ọtọdọks nke Bulgaria, na mgbakwunye na ngosi ihe mgbe ochie na mahadum. Buru n'uche na oyi na-atụ na snowy, ya mere kpachara anya ka ị na-aga na Jenụwarị, ọnwa oyi kacha mma. Summer bụ oge kacha mma.
Ebe a na Sofia ị nwere ike ịga Opera malitere na 1891, National Art Gallery, National Historical Museum, Archaeological Museum na N'ezie, Alexander Nevski Katidral. ya na crypt ya mara mma. Nke ụlọ ụka boyana, Maka akụkụ nke ya, ọ bụ saịtị ihe nketa ụwa.
N'ezie, ịgagharị n'okporo ámá ya dị mkpa iji nwee ike ịmasị ya eclectic architecture nke na-achọ ya mma Ụfọdụ nnukwu anụ ndị na-elekọta mmadụ kwesịrị ịkele ekele ahapụla n'etiti ọla baroque na rococo. E nwekwara ogige ntụrụndụ ndị a na-edozi nke ọma n'ime obodo ahụ na n'èzí. Dịka ọmụmaatụ, na-aga n'ihu ruo na Ugwu Nitosh, 2000 mita n'elu oke osimiri, site na nke ị nwere ọmarịcha anya nke Sofia.
Plovdiv bụ obodo kacha ochie na Europe. Ya mere, o nwere ọtụtụ saịtị akụkọ ihe mere eme, gụnyere a ebe ihe nkiri roman ochie na ọbụna taa na-enye ihe ngosi. Ụka jupụtakwara, ha nile wuru n'elu ugwu asaa na-akpụ akpụ, n'ime obi ndị Balkan na Rhodopes.
Ma ọ bụrụ na mmanya na-amasị gị ma na-amasị gị ịnwale ụdị mpaghara mgbe ọ bụla ị na-eme njem, nke ọma, obodo a apụtala n'oge na-adịbeghị anya na ọnọdụ mmanya, ya mere, ka anyị ṅụọ ka ekwuru! Nleta ọzọ ị na-agaghị echefu bụ Ebe obibi ndị mọnk Rila.
Ụlọ okpukpe a bụ n'ugwu Rila Ma ọ mara mma na ochie. E hiwere ya na narị afọ nke XNUMX nke Saint John nke Rila, onye na-eme ihe ike. Kemgbe ahụ ọtụtụ puku ndị njem na ndị njem ala nsọ eletala ya ma nọgide na-eleta ya.
Ekwuru na ndị ndu mgbanwe Vassil Levski na Peyo Yavorov gbabara ebe a na ebe obibi ndị mọnk. nwere ọrụ dị mkpa n'ichekwa omenala odide Bulgarian idowe ihe odide 250 karịa ma ọ bụ obere site na narị afọ nke XNUMX ruo na narị afọ nke XNUMX. Ụlọ ahụ dị oji na ọcha, nwere ọtụtụ oghere, steepụ osisi na nnukwu ọnụ ụzọ ígwè. Taịlị ndị ahụ na-agbakwunye agba na eserese ha mara mma nke ukwuu.
Obodo nke Nessebar ọ bụ n'ụsọ oké osimiri Ojii, n'ógbè Burgas. nwere nnọọ uru akụkọ ihe mere eme-nkà ihe nketa, karịsịa na etiti akụkọ ihe mere eme ya. Alaeze ukwu atọ agafeela ebe a, Alaeze Ukwu Byzantium, Bulgarian na Ottoman, n'agbanyeghị na mmalite ya laa azụ n'oge. ọ bụ obodo ndị Gris a na-akpọ Mesembria na ọbụna tupu mgbe ahụ, na ebe obibi Thracian.
Obodo ahụ dị n'akụkụ ala dị larịị, nke bụbu àgwàetiti nke e ji ígwè kpọchie ya na sthmus dị mita 400, ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla nwere n'ụba, ọ bụ ya. ụkaee Ebe ọ bụ na 1983 obodo bụ Ihe Nketa Ụwa dị ka UNESCO si kwuo. Apụla na-agaghị na Basilica nke Nne Nsọ nke Chineke Eleusa, Ụka San Juan Bautista, nke Christ Pantocrator ma ọ bụ nke Ndị Mmụọ Ozi Ndị Mmụọ Ozi Michael na Gabriel, nke e wuru n'etiti narị afọ nke XNUMX na XNUMX.
Ma ọ bụrụ na ụlọ ụka adịghị amasị gị nke ukwuu, ị nwere ike ịga na nke ha mgbe niile Osimiri. Ha mara mma na a na-akpọkarị akụkụ Bulgaria a pearl nke oke osimiri ojii. Oke osimiri mara mma ma na-ewu ewu bụ Sunny Beach.
N'aka nke ọzọ, Varna bụ obodo dị n'ụsọ oké osimiri a nụchara anụcha nke ukwuu nke nwere ọtụtụ akụkọ ihe mere eme. Iji zute ya, ị nwere ike ime njem nleta Museumlọ ihe ochie mgbe ochie na a ihe ngosi ọla edo n'ezie phenomenal. A chọtara ọtụtụ n'ime ya na Varna necropolis, ma mejupụtara ya ngwa agha, ọla na mkpụrụ ego sitere na 4600 BC Ụlọ ịsa ahụ ndị Rom bụkwa nhọrọ ma ọ bụrụ na akụkọ ihe mere eme na nkà mmụta ihe ochie gụnyere.
N'aka nke ọzọ, Katidral nke Assumption nke Virgin na Opera House na-emeghekwa nleta. Na n'ezie, n'ụsọ oké osimiri, osimiri na ụlọ mmanya na ụlọ oriri na ọṅụṅụ. A maara ya dị ka isi obodo mmiri nke Bulgaria.
Kedu ihe anyị nwere ike ikwu banyere ya Bansko? Ọ bụrụ na-amasị gị ski na ị naghị atụ egwu oyi Bulgarian, nke a bụ ebe ị na-aga. Ọ dị na ndịda obodo ahụ n'okpuru ugwu Pirin na elu ya fọrọ nke nta ka ọ bụrụ puku mita 3, naanị 160 kilomita site na isi obodo Sofia.
El ebe ezumike ski A maara Bansko nke ọma ma nwee otu n'ime oge ski kacha ogologo na mba ahụ. Ị ga na-asọmpi na ntụrụndụ na Switzerland ma ọ bụ France ma nwee ọnụ ala dị ọnụ ala. N'ụzọ doro anya, gafere egwuregwu, e nwere ihe niile a ga-eme tupu na mgbe ọrụ.
Veliko Tarnovo, n'etiti obodo, bụ a obere obodo nke nwere a akụ: na Ebe e wusiri ike nke Tsarevets, bụ ebe obibi nke Tsars. Ebe e wusiri ike dị otu puku mita n'ịdị elu ma ejiri nkume mee ya ma site n'ebe ahụ ị nwere nlele 360º nke obodo na ugwu ndị gbara ya gburugburu.
N'aka nke ya, onye akụkọ ihe mere eme nke Valiko Tarnovo ọ bụ nkume bara nnukwu uru nwere okporo ụzọ nkume nkume, ụlọ ọdịnala na ụlọ ụka ochie. E nwekwara ebe obibi ndị mọnk nke Holy Transfiguration of God, ọmarịcha ụlọ ochie, onye lanarịrị ebe obibi ndị mọnk 300 nke obodo ahụ nwerebu.
Sozopol bụ obodo dị n'ụsọ oké osimiri na obodo kacha ochie na mba ahụ. Ọ malitere na 610 BC ma ndị Gris tọrọ ntọala ya onye akara ya ka na-ahụ anya. E mesịa, obodo ndị ọzọ na alaeze ukwu ndị ọzọ ga-agafe, ya mere e nwewokwa akara nke ha nile na ebe ewusiri ike, ụka na mgbidi. Ma Sozopol kwa ọ bụ spa na oké osimiri na-achị ya n'ụsọ oké osimiri na stupendous osimiri. A na-enwekarị mmemme omenala na enwere ọtụtụ nhọrọ ma a bịa n'ịpụ n'abalị ma ọ bụ iri nri.
Koprivshtitsa Ọ bụ obodo akụkọ ihe mere eme dị n'akụkụ osimiri Topolnitsa, n'etiti ugwu. Ihe owuwu ya bụ Bulgarian na ebe ọ na-eme ọtụtụ mmemme egwu, a na-eleta ya nke ukwuu. Ọ bụ otu n'ime ebe a ma ama Eprel 1876 Mwakpo megide Alaeze Ukwu Ottoman, ma ọ dị naanị kilomita iri na otu site na Sofia.
nwere kpam kpam 383 architecture ihe ncheta na niile anya, mweghachi site, dị ka ha na mbụ. Kwa afọ ise obodo akwado ndị Bulgarian National Folklore Festival ya mere ndị na-ese ihe, ndị omenkà na ndị na-egwu egwu si n'akụkụ nile nke mba ahụ na-agbakọta ọnụ.
Agbagharala ịmara nke ahụ Ụlọ Oslekov, mbụ ụlọ nke ọgaranya ahịa si 1856, na Ụlọ Topalova, site na 1854. Ha abụọ nwere arịa ụlọ oge ma bụrụ windo n'ime otú ndụ dị mgbe ahụ n'obodo a mara mma.
N'ikpeazụ ọzọ obodo gbara osimiri okirikiri nke n'aka nke ya gbara ọtụtụ ọdọ mmiri gburugburu: Burgas. Njem njem na Burgas rutere nke ọma na narị afọ nke XNUMX, n'agbanyeghị na ụlọ ọrụ mbupu mere na mbụ, ebe ọ bụ na ọdụ ụgbọ mmiri ebe ọ zuru ike dị mma maka ụlọ ọrụ ahụ. Taa na osimiri a na-edozi nke ọma ma chọọ ya mma ụlọ oriri na ọ barsụ andụ na ụlọ mmanya nke na-eme ka njem ahụ na-atọ ụtọ karị.
Ma n'ezie, ị nwere ike inyocha gburugburu mgbe niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Bulgaria » Ihe ị ga-ahụ na Bulgaria
Ihe ị ga-eme na Salamanca